A ciyaarta Afyare gaar ah online online qaar ka mid ah sifooyinka gaarka ah, Bank Action waa madal weyn inuu ku guuleysto lacagta dhabta ah online. Gamblers jecel theme classic in kulan Afyare, laakiin dhammaantiin ma aha ee boosaska classic mobile online Kaapelitalo waa naadi horusocod. Barcrest waxa uu qabtay shaqo aad u weyn oo ay soo bandhigid Bank Action maxaa yeelay sifooyinka bonus ay kaa caawin karaan ciyaartoyda ku guuleysan waaweyn.
Waa shan ambadeen iyo 20 ciyaarta Afyare online betline la soo bandhigtay qaar ka mid ah calaamadaha u xiiso badan. Gamblers heli lahayd arrin rafcaanka sababta oo ah sawiro iyo tayada maqal ah oo muusiko ah. The Buugga khamaarka dhamaystiran la siiyo hoos ku dhinac oo shaashadda iyo in sidoo kale xulashada auto-play.
Calaamadaha iyo Game-Play:
Bank Action jiidata khamaara badanaa sababta oo ah calaamadaha ay. Kulankaan ayaa saddex calaamadaha ugu muhiimsan ee, cas 7, X iyo BAR. Kuwanu waa saddex calaamado in Waad arki doontaa duntu ka fur ah. Waxa kale oo aad karto wareegyada badan oo cad, laakiin aan kuu abaalgudi doona abaalmarinta kasta. The laba calaamadood oo muhiim ah oo kulankan waa Joker The, astaanta duurjoogta iyo ilaalinta imkaaniyaadka Golden The, astaanta kala firdhiso. Isku day inaad dalka, kuwaas oo laba calaamadood oo goor badan intii suurto gal, waayo, kuwan oo ku siin kara qaar ka mid ah guul weyn iyo muuqaalada bonus.
Ciyaarta ayaa si qumaati ah oo u san yahay labada screens waaweyn iyo kuwo yaryar. Waxaad u ciyaaro naadi kale online mobile si la mid ah, laakiin muuqaalada bonus abuuri farqiga weyn ee u dhexeeya Action Bank iyo boosaska kale ee online mobile online.
Jidka kasban qaar ka mid ah dhaaf weyn ee kulankaan:
Ma aha sidaas u adag in la ogaado in isku xigxiga degtey ee 7s cas ayaa kaa caawin kara in kasban qaar ka mid ah loo laablaabi cajiib ah. Waxaad ku guuleysan karto ilaa 500x ee lacagta aad ku duceysanayaan iyo in uu noqon doono guul cajiib ah kuu. The wareegyada cad noqon kartaa wareegyada dahab ah ciyaarta iyo markay dhacaan, waxaad ka heli qaar ka mid ah loo laablaabi more.
The feature wareejin free ku xiran tahay kala firdhiyaa ah. Caga shan ama ka badan calaamado kala firdhiso celin doonaa feature ku wareejin free kuu. Astaanta duurjoogta ah ka shaqeeya si la mid ah sida ay ugu naadi kale online mobile. Waxaa bedeli doona calaamado kale si ay u abuuraan isku xigxiga oo wanaagsan ku guuleystay.
Bank Action qoreysa feature bonus Big Bank in dood goosashada ku wareegsan. Waxaad ka qaadan kartaa mid ka mid ah calaamad ka diamond, guduud ama xataa dhagaxa safayr si ay u helaan qaar ka mid ah loo laablaabi more.
Bank Action waa ciyaar kaamil online Afyare for badan oo badhaadhaha iyo ficil. Kulankaan ayaa 95.16% RTP iyo aad dhab ahaan ku guuleysan karto Ghanna ah by caga darka guusha.